“Ka turjumi mayso diyaaradii Hargeysa ka kacday ee maatida xasuuqday.” Xildh C/qaadir Jirde | Berberanews.com
Home WARARKA “Ka turjumi mayso diyaaradii Hargeysa ka kacday ee maatida xasuuqday.” Xildh C/qaadir...
“Ka turjumi mayso diyaaradii Hargeysa ka kacday ee maatida xasuuqday.” Xildh C/qaadir Jirde
Hargeysa-(Berberanews)-1988kii ayay ahayd diyaaradihii Taliskii Siyaad Barre ee ku sugnaa Madaarka Hargeysa oo intay ka kacaan dub u duqayn jiray magaalada.
Xus iyo xasuus loo sameeyay ficilladaas arxan darrada ah ayaa mid ka mid ah diyaaradaas oo Taallo looga qotomiyay Fagaaraha Khayriyadda Hargeysa, halkaasoo ay soo booqan jireen cidkasta oo ku cusub Somaliland ama danaynaysa taariikhdeeda.
Dawladda Somaliland, ayaa todobaadkii hore soo bamdhigtay nashqad cusub oo loo samayn doono Taalladaas, iyadoo islamarkaana la soo dejiyay diyaaraddii goobtaas sudhnayd.
Hadaba, Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland iyo maamulka Xisbiga Waddani, ayaa sheegay in Nashqadda cusub ee Xukuummaddu soo bandhigtay inay u dhalan rogayso Goobtaasi tahay mid laga soo min guuriyay dhaqanno shisheeye oo aan xidhiidh la lahayn ujeedkii diyaaraddaas laga lahaa.
Xildhibaan Jirde oo faahfaahinaya nashqadda cusub iyo taariikhda ay leedahay waxa uu yidhi, “Ninkii garanayaa, garanayee, Ruushka oo dagaalkii labaad ee adduunka soo maray aad bay u xusaaan oo taallooyin waaweyn baa loo dhisaa guusha waaana taariikh oo illaa Boqortooyadii Roma marka ciidanku soo guulaysto aargooyin baa loo samayn jiray.
Dhaqan ahaan aargadu halkaasau ka socotaa, markaaa waadiga arkay Xarunta weyn ee paris ku taalla ee baabuurtu ka leexato, oo Xamar bay ku ooli jirtay oo berigii Faransiisku u sameeyay, meelihii Romanku guumaystay oo dhan bay ku taallaa, markaa waxaa loo sameeyaa guulo la gaadhay.”
Xildhibaanka oo ka hadlayay waxay ka turjumayso argadan cusub, waxaa uu yidhi, “Tan maanta laga hor dhisayo Khayriyada, hadaad eegto qaabka, oo dub u fiirsato dalalkii waxaas sammeeyay waxaad moodaa in Guul loo dabaaldegayo.
Aargayaashaasi dhaqankeena meela kagama jiro mana dhisano inagu, caalamka Islaamkana lagama dhiso ee waa dhaqan ka yimi Roman-kii iyo Giriigii, wax xaddaaraddii Islaamka aynu ka dhaxalay maaha ee waa wax qoladaas ka yimi.
Tii uum baa meel lagu arkay oo la soo guuriyay, tan la sol guuriyayna waxaa weeye Askari Ruusha oo guul dagaal loogu dabaaldegayo ayaa dul taagan.” Sidaas waxaa yidhi Xildhiban Cabdiqaadir Jidre oo u warramayay Telefiishanka.
nashqada diyaada Hargeysa
Taalada cusub ee diyaarada Hargeysa
Xildhibaan C/qaadir Jirde
Previous articleIran oo deldeshay Suxufi
Next articleWasiirka Ingiriiska u waabilsan Afrika Oo ka waramay srrimo Somaliland Ku saabsan oo uu kaa hadlay Madaxweynaha Soomaaliya